ရန်ကုန်မြို့ကန်တော်ကြီးပန်းခြံအတွင်း စွန့်ပစ်ထားသည့်အိမ်ထောင်စုစာရင်းနှင့် နိုင်ငံသားစ? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်မြို့ကန်တော်ကြီးပန်းခြံအတွင်း စွန့်ပစ်ထားသည့်အိမ်ထောင်စုစာရင်းနှင့် နိုင်ငံသားစ?
ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂-ရန်ကုန်မြို့ ကန်တော်ကြီးအတွင်း စွန့်ပစ်ထား သော အိမ်ထောင်စုစာရင်းနှင့် နိုင်ငံ သားစိစစ်ရေးကတ်မူရင်း၊ စုစုပေါင်း ၁၈၀ ကို တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ဗိုလ်ချို (၂) ရပ်ကွက်၊ ကန်တော်ကြီးပန်းခြံအတွင်း ကျန်းမာရေးအတွက် အားကစား လေ့ကျင့်နေသူများက လမ်းဘေး သစ်ပင်တစ်ပင်အနီးရှိ မြက်ပင်များ ကြားတွင် စုပုံထားသည့် နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်မူရင်းများနှင့်အိမ် ထောင်စုစာရင်းမူရင်းများကို ဒီဇင် ဘာ၂ ရက် နံနက် ၆ နာရီခွဲခန့်က တွေ့ရှိသဖြင့် ရဲစခန်းသို့ ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားခဲ့ရာမှ တွေ့ရှိခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ ထံမှ စုံစမ်းသိရသည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သွားရောက်စစ် ဆေးခဲ့ရာကန်တော်ကြီးအတွင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်အနီးရှိ အားကစား ကွင်းအနီးတွင် နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်မူရင်း ၁၅၉ ခုနှင့်အိမ်ထောင် စုစာရင်းမူရင်း ၂၁ ရွက်တို့ကိုတွေ့ ရှိသိမ်းဆည်းခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
တွေ့ရှိခဲ့သည့် မှတ်ပုံတင်များ နှင့် အိမ်ထောင်စုစာရင်းအများစု မှာ အကောင်းများဖြစ်ပြီး မည်သူ မည်ဝါထားသွားသည်ကို စုံစမ်းနေ ဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင် ရှာဖွေသိမ်းဆည်း ရမိသည့် မှတ်ပုံတင်များနှင့် အိမ် ထောင်စုစာရင်းများကို လဝကသို့ အပ်ထားပြီးရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်း စစ်ဆေးနေကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ဒီမို ကရေစီတူဒေးသို့ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက် ကပြောသည်။
“”အဲဒီမှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ် တဲ့ လူတွေကတွေ့လို့ ၁၉၉ ကိုအ ကြောင်းကြားတယ်။ နောက်ရဲစခန်း ကိုအကြောင်းကြားတော့ သွားစစ် ဆေးတာ။ ပုံထားသည့်အတိုင်းတွေ့ တာ။ တချို့တစ်ဝက်ကရေစိုနေ တော့ ပျက်စီးနေတယ်။ ဘယ်သူက ဘာသဘောနဲ့ ပစ်သွားတာကိုတော့ မသိရသေးဘူး။ စုံစမ်းနေတုန်းပဲ။ လက်ရှိမှာသက်ဆိုင်ရာကို အတု လား၊ အစစ်လားဆိုတာသိနိုင်ဖို့အပ် ထားတယ်”” ဟု ၄င်းကဆက်လက် ရှင်းပြသည်။
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မူရင်း အများစုမှာ လိပ်စာမျိုးစုံပါဝင်ပြီး (၁၈) နှစ်ပြည့်ပြီး အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မှတ်ပုံတင်များ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တိုင်းပြည်၏နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ စစ်ရေး အခြေအနေမှန်များကိုသိရှိထားကြရန်နှင့် ပြည်သူက ယ?
ပဲမျိုးစုံနှင့် ဆီထွက်သီးနှံကဏ္ဍ တိုးတက်လာစေရေး မြန်မာ့သြဘာနှင့် တောင်သူများပူးပေါင်း၍ အရ??
စီမံကိန်းများကို ရိုးသားစွာ ဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် လုပ်ဆောင်ရာ၌ အိတ်ထောင်ထဲ ငွေထည့်သိမ်းပြီ?
ရန်ကုန်တိုင်း ရွှေအသင်း တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးကို ဒေါ်လာဈေး ကစားမှုဖြင့် ဖမ်းဆီး
ဇင်ဘာဘွေ သမ္မတသစ်၏ အစိုးရအဖွဲ့တွင် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ ပါဝင်